Kooxda Dekaddaha oo guul weyn ka gaartay Heegan kulan qeyb ka ahaa horyaalka Somali Premier League – Gool FM
(Muqdisho) 02 Luulyo 2021. Kooxda Dekaddaha ayaa guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Heegan 1-4, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Somali Premier League oo galabta ka dhacay Tuulada ciyaaraha dalka ee Stadium Mugadishu.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda Dekaddaha.
Daqiiqadii 23-aad kooxda kubadda cagta Dekaddaha ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana gool u dhaliyay xiddigooda Anwar Shakuunda kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Idris Amiin, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 0-1.
49 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Dekaddaha ayaa la timid goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaana 0-2 ka dhigay Asagou Emeka, kaddib markii uu kubadda ka toogtay meel ka baxsan diilinta ganaaxa.
Daqiiqadii 72-aad Anwar Shakuunda ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 0-3 ay ku hoggaamineyay kooxda kubadda cagta ee Dekaddaha.
Laakiin daqiiqadii 75-aad kooxda Heegan ayaa dhalisay gool waxaana ciyaarta 1-3 xiddigooda Lambarka 11-aad ee ceydiidoow.
Daqiiqadii 82-aad Xaaji Macalim oo caawin ay kaga timid saaxiikiis Asagou Emeka wuxuu dheesha ka dhigay 1-4 ay ku hoggaamineysay kooxda Dekaddaha.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-4 ay kaga adkaatay Dekaddaha kooxda kubadda cagta Heegan, kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen tuulada ciyaaraha ee Stadium Mogadishu.
Xulka Spain oo iska xaadiriyay wareega Afarta Koobka EURO 2020 kaddib markii uu rigoorayaal kaga soo gudbay Switzerland… +SAWIRRO